किशोर दहाल आइतबार, कात्तिक ९, २०७७, ०९:५४
कुनै पनि चाडपर्वको कुरा आउनेबित्तिकै त्यहाँ खानपिनको कुरा आउँछ। खर्चको कुरा आउँछ। दसैंलाई अनावश्यक रुपमा ज्यादा खर्च गर्ने अवसरको रुपमा माथिल्लो वर्गले प्रयोग गर्छन्। सम्पत्ति प्रदर्शन गर्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गर्छन्। त्यसको मारमा तल्लो वर्गका मानिसहरु पर्छन्। उनीहरुले माथिल्लो वर्गका मानिसहरुले जसरी खर्च गर्न सक्दैनन्। त्यसपछि उनीहरु भावनात्मक, बौद्धिक र व्यवहारगत रुपमा उत्पीडित हुन पुग्छन्।
पञ्चायतकालसम्म छठ रानीपोखरीमा मनाउने चलन थियो र? पञ्चायतले दिन्थ्यो र? मधेसीको चाडलाई त दिँदैनथ्यो। अब अहिले त रानीपोखरीमा, बागमतीमा वा अन्य तलाउमा मनाउँदाखेरि उपत्यकाबासीलाई दुःख भएको छ र? झन् खुसी भएका छन्। यहाँ बसेका मधेसी पनि मनाइरहेका छन्। पहाडीयाहरु पनि गइरहेका छन्। जनसमुदायमा भएका चिजलाई सम्मान गर्दा खुसी नै बढ्ने हो नि। किन दमन गर्नुपर्‍यो। यो ठीक भएको छैन।
(नेपाल लाइभ अर्काइभबाट। यो सामग्री पहिलो पटक २०७६ असोज १८ गते प्रकाशित भएको हो। )